Burmese Fairytale ( @burmesefairytale ) Instagram profile • pikore.co
Burmese Fairytale (@burmesefairytale)
Mother ❤️ Burmese Entrepreneur 🍭ice cream Eater 🍦This is just for the stuffs I love- Don\_'t judge me and don\_'t find out who I am-be Fashionable🛩☁️🍤🍣⚓️
Burmese Fairytale ( @burmesefairytale )'s Instagram Medias
No one knows how stressful it would be to keep up everyone’s expectations and look perfect - RIP #shridevi that’s why I decided to stay in sweats- ဒီနေ့ယောက်ကျားနေမကောင်းလို့ လူမှူရေးပျက်ကွက်မှူတွေခွင့်လွှတ်ပါ
Have you got your Love on today ? #loveblush လေးတွေဆိုင်တွေမှာဒီနေ့ ရှိပြီနော်! အချစ်ရဲ့အနမ်းတွေ အတွက် @bella_beastar #loveblush လေးပါးပေါ်တင်နော် #thanksforthephotos @arielthuta @lintun79 @suyee @burmesemuamizzyei
Surprised Gift 🎁 We got home at 1:30 am and I found an unexpected gift on my pillow from the darling husband @zawlatt .. and it’s the bag I been looking for but i didn’t even tell him I wanted- he read my mind #besthusbandever ကြွားပါရစေနော်.. အလုပ်ပြီးချိန်ည၁ နာရီခွဲထိ လိုက်စောင့်ပေးပြီးဘာမှမပြော- အိမ်ပြန်ရောက်တော့ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ သစ်အရမ်းလိုချငိပြီးရှာမရတဲ့ အိတ်တလုံးကို သူကိုတောင်မပြောသော်လည်း သ
My darling husband @zawlatt went and get meapair of shoes as soon as the shop opened (walked 30 mins to it) just cause I told him it’s cute At midnight last night #ihavethebesthusbandever မိုးလင်းတော့ဖိနပ်တရံကို instagram story မှာတွေ့ပြီးကြိုက်လို့အိပ်နေတဲ့ယောက်ကျားစီပို့မိတယ်။ သူကထကြည့်ပြီး ဆိုင်ကမနက်ဖွင့်တာနဲ့ နာရီဝက်လမ်းလျှောက်သွားပြီး ချက်ချင်းဝယ်ပေးတယ်! ဝယ်ပေးပါလို့လဲမပြောရဘူး.. ဝယ်ပေးရလို
My team got my favorite flowers 🌸
It’s alwaysateam work - thank you to special agent @phwayoopsie and ko @winlwinhtet and ma @thandarkoko and ko @akt24 for being with us and ko @wyne.owncreator for making my @bellamen_care dreams come true and my #awesometeam we been having midnight shift foramonth now
Hello U Wyne @wyne.owncreator with @bellamen_care - I been dreaming about this and working with Ko Wyne since in my early 20s-
မခိုင်လေးကပြောတယ် Star တယောက်ဖြစ်ဖို့ အရေုးကြီးဆုံးအရာက... ခြစ်ဖို့လေ... @s.htate_26 @khinethinkyi @bella_beastar
ကျွန်မတို့သုံးယောက်သည်လိုချင်ချင်း ရယူပိုင်ဆိုင်လိုချငိးမရှိဘဲတယောက်ကိုတယောက်မိသားစုလိုချစ်ခင်ပါသည်။ အစားတောင်လုမစားတက်ပါလို့! တယောက်ကိုသစ္စာဖောက်ရင်ကျန်နှစိယောက်ရဲ့စာရင်းထဲမှာတောင်မထည့်တက်ပါ! ဒီပုံရိုတိတဲ့နေ့ကတည်းက ကျန်မတို့အားလုံးရဲ့ဘဝထဲမှာမရှိတော့တည့်သူတွေများကြီးပါ- ၁ ယောက်ထိရင်ကျန်၂ယောက်ကလည်းစဉ်းစားရအောင်ဉာဏ်မနည်းကြောင်း ဉာဏ်နည်းသူတွေကို🤪😍@yinyinymt @its_me_mya_lay စိတ်မဆိုးတက်ဘူး 🤩🤩😝ရီရလွန်း
Onceayear At least I go to temple and pretend I am Chinese @ootdmyanmar - again this isaFully Sponsored Post- I forgot that I needed to wear new clothes for the new year so my darling sister @khinethitlwin send me dresses @mdsmyanmar (all available and they are will look better on you than me)😍 makeup by @heartyheartcosmetic (Again sponsored by babies) Sun Glasses @lemarbles by my darling @pam
Soo it’s Chinese New Year 😜 I need to wearanew red dress yet I haven’t shop thus I got this from my sugar mommy @mdsmyanmar (available now- totally sponsored post and I am wearing size S andabit big on me 🤩) and New hair plus my own makeup 💄 #goldenacademylipsticks @bella_beastar and those who kept asking if I am ever gonna post any outfit posts .. here’s 10 @ootdmyanmar and this is for your
So I turned Pink for the month of Love 💕 Not loving it
16th Valentine and yes he doesn’t fail to surprise me 😍💕 @zawlatt #bestvalentinesever
I amabig Valentine Girl!! And it’s so sweet cause my team surprise me with something every hour - and every year we send out Valentine to more than ten thousands of our team members 💗💕🎁
Happiest Birthday to Khay— the soul behind @burmese_fashion_closet and thank you for loving me so much 💕😍 it’s Khay who dresses me up and Make sure I look decent these days
Happiest Valentine that I woke up to 💕 of course this is after my husband took me out onamidnight spin after work (wasn’t his fault he was waiting for me since7yet work just didn’t finish😩) flowers from my K3 @okkarngwe @khinethitlwin and KBayBay and Promise Tee from my Girls @carolaung @paing_thwe_thwe_phyo @princess_pan_nu .. Love is in the air - we havealot of surprises from @heartyheartc
Whatasweet valentine 💕 Its our 16th this year @zawlatt
My baby @yunwlm Valentine Tutorial is at @heartyheartcosmetic Page and Khay’s Page we have something special coming in for Valentine Live as well!! Stay Tune...
24 hours till @phwayoopsie Valentine Tutorial on @bella_beastar told ya this year valentine will be the best ever
My6years old @isabelmarant sometime it’s good to shop in my own closet
ညမအိပ်ဘဲ ၃၆ နာရီအတွင်း ဒီ ၃၆ နာရီခံ 💦💧 WaterProof Smudgeproof @bella_beastar #GelEyePencil ကြော်ငြာပို အပြီးလုပ်ပေးတဲ့ @thandarkoko ရယ် သစ်ရဲ့ team @annaswaytin @paing_thwe_thwe_phyo @carolaung @paingsoethu @ahha @kaungkaung @nyinyi နဲ့ ဆရာလေးကို Love ya! Its Out now! 2275 in every @abccvs
1-2-3 🌽 Corn!!
This is 🐷🐽
This year valentines @bella_beastar promise it be better than last
ည ၈ နာရီ @heartyheartcosmetic
Sneak Peak for tomorrow @heartyheartcosmetic with @beautybynaychi and @alinnyaunglight directed by @winlwinhtet @thandarkoko
Bella Valentine 2018 @bella_beastar with our girl @phwayoopsie and ကိုကိုရဲတိုက်
This is called Love ❤️ okay it’s called Hardcore Prawns by #Byblos beside Real Fitness..Must eat everyday - I should becomeafood blogger instead ofafashion so called blogger fromadecade ago
ဒီနေ့ Food Blogger လုပ်နေတာ
I do miss the chill of Boston Winter at @hbs this year.. may Be I should really take less load next Jan and try to make it to HBs again:)3years since the first week there
ရန်ကုန်က စိုးစိုးမုန့်တီ! ကျွန်တော်တို့လဲခောတ်မှီသွားပြီ
Meredith Greys wonaHarper Avery! And I cried likeababy! If you know Me deep down you know how much I identify myself with Mer.. she comes from messed up Family of surgerical royalty and married one as well. Yet she becomes her own person and won her own award. I married my MacDreamy and have my Mackids and lost my Alzheimer’s grand mother and so on and on.. 14th season never missed an episode
Happiest May May Day- မေမေ့ကြောင့်သစ်အသက်ရှင်နေတာပါ။ အဖေ့ရုပ်နဲ့အမေ့စိတ်ဖြစ်အောင်မွေးပေးထားတဲ့သစ်မေမေ။လူတွေအားလုံးကို အမြဲအကောင်းဘဲမြင်ပြီး ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို အမြဲအပြည့်အဝလုပ်ပေးတဲ့သစ်မေမေ.. ဘဝမှာ အဆိုးဆုံးအချိန်တွေမှာအမြဲသစ်နားမှာခွန်အားပေးတဲ့မေမေ.. မိသားစုထက် သူ့ လူနာတွေမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကို အချိန်ပေးတဲ့သစ်မေမေ။ မိန်းမဆိုတာ အမြဲလှရမယ် အမြဲတောင်အောင်ကြိုးစားရမယ် အမြဲကိုယ်ပိုက်ဆံကိုယ်ရှာရမယ်လို့သင
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈လလောက်က @bella_beastar စချိန်မှာ ဦးလွင်မိုးရယ် ယောက်ကျားရယ်ခေါ်လို့ နမတောင်ခေါ် Mount Vicotira ရောက်သွားတယ်။ ဖုန်းတလုံးနဲ့အလုပ်အမြဲ အလုပ်များတဲ့ သစ်ကို နင်ဖုနိးနဲ့ရှုပ်နေတာ မမြင်ချင်လို့ လိုက်ခဲ့တဲ့။ အော် ကိုယ်ကငယ်ကြောက် (သူတို့ကလဲ သစ်ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်လနိတာပေါ့နော်) ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးပါသွားတယ်။ ဖုန်းမရှိတော့ အဲ့တုန်းက product တွေစမ်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ တချိန်လုံးလက်မှာ 💄တွေစမိးလိုကိ ဒေါ်@may
အိုပြီဆိုတာ... ကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေ ဒီလိုပြောင်းသွားချင်း! ငယ်ငယ်က မေမေတို့က ပင်ပန်းတာတွေမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတုန်းက 🤯 အခုတော့ ကိုယ်လဲ 🤪ရှပ်ရုင်ကြည့်ချိန်က ပေါ်မှာ ✈️ wifi မရှိသောအခါ.. Stress ဖြစ်မှာ ဘာမှမကြည့်.. စာတောင် biography ဘဲဖတ်ပြီး Documentary သာကြည့်ရင်း.... အမှနိတော့နေတိုင်းကြည့်ရတာ annimation ခေါ်တဲ့ Cartoon ပေါံ TV က သမီးတွေ ပိုုင်တာလေ
သူတို့နှစိယောက်ရဲ့ Valentine Flowers တဲ့ @makeupbymayoo နဲ့ @hanlin_mo ကိုယ်တိုင်ထိုးပေးတာပါတဲ့
Finally I haveateam who spoil me rotten 😍 @princess_pan_nu @carolaung @paing_thwe_thwe_phyo for getting me V day presents soo early ... စမီးကို finally V day Gift ပေးတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာ လာကြွားတာ!! Tag လိုက်တာနဲ့ ဝယ်ပေးတဲ့ Sugar Mar Mar တွေကို love ya three 😜😘😍😝 so much နောက်ဆုံးပုံကြည့်ပေးနော်
အခက်အခဲပေါင်းများစွာထဲကနေလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ပွဲမလုပ်ခင် တပတ်အလိုမှ သိခဲ့ရပြီး အလှူပွဲဖြစ်လို့ Main Sponsor အနေနဲ့ချကိချငိးပေးခဲ့ဖြစ်တာပါ။ အလုပ်ကိုတိတိကျကျလုပ်တက်တဲ့သစ်တို့ team အနေနဲ့တော်တော်လေးခက်ခဲပြီးမျက်ရေတောင်ကျခဲ့ရတယ်ပေါ့။အားလုံးက rush ဖြစ်တာရယ် အခြေအနေ အချိန်အခါရယ်နဲ့အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ကြားကနေ အစကတည်းက အပြည့်အဝ တဘဝလုံးမြုပ်နှံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ သစ်ရဲ့@bella_beastar team အရမ်း Professional ဖြစ်တဲ့ U @john_
အမွေပေးတယ့် @emeraldboutique_ymt ;) အင်းယားလမ်းဆိုင်သစ်မှာ အရမ်းအောငိမြင်မှာပါ! FGM ရဲ့ @mogokpaukpauk ဆိုင်နဲ့ကပ်မှာနော်! အရမ်းချစ်တယ်လို့လေ-- အခုတော့ ရုံးအဲ့ကိုရွှေ့ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေပြီ
WHICH IS YOUR FAVE ? @ootdfash 😻😭🔥 Search: Danny Jeans ✨ Cassy Sweatshirt ✨ Stassie Set ✨ Sydney Pants 🙌🏼 Everything else on our IG story is going up today